merolagani - मिर्मिरे र समता माइक्रोफाइनान्सले असार २७ गतेदेखि हकप्रद जारी गर्ने, कसले गर्न पाउँछ आवेदन ?
मिर्मिरे र समता माइक्रोफाइनान्सले असार २७ गतेदेखि हकप्रद जारी गर्ने, कसले गर्न पाउँछ आवेदन ?
Jun 24, 2018 Merolagani
मिर्मिरे र समता माइक्रोफाइनान्स दुबैले असार २७ गते एकै दिनदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएका छन् । मिर्मिरेले एक बराबर एक तथा समताले दुई बराबर एक कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेकाे हाे ।
मिर्मिरे लघुवित्त (MMFDB) ले चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको चार लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । हकप्रदको बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
हकप्रदमा जेठ १७ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले साउन २९ गतेसम्म आवेदन गर्न पाउनेछन् । धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति प्राप्त जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन गर्न सकिनेछ ।
त्यसका अलवा सेयरधनीले विक्री प्रबन्धकको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय र लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा काभ्रे तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा कार्यालयहरु विराटनगर, बीरगञ्ज, नारायणगढ, नेपालगञ्ज, बुटबल र धनगढी र शाखा कार्यालयबाट समेत हकप्रदमा आवेदन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
चार करोड ५० लाख चुक्ता पूँजी रहेको लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद पूँजीकरण पश्चात चुक्ता पुँजी ९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । गत बर्षको नाफाबाट लघुवित्तले ३०.८० प्रतिशत बोनस वितरण गरेको छ । बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी १० करोड ३८ लाख ६० हजार कायम हुनेछ ।
लघुवित्तको सेयरमूल्य बिहीबार प्रतिकित्ता एक हजार ६१७ रूपैयाँ रहेको छ । गत भदौ २६ सम्पन्न लघुवित्तको विशेष साधारणसभाले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
उता समता माइक्रोफाइनान्स(SMATA) ले पनि असार २७ गतेदेखि चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । लघुवित्तले दुई बराबर एक अनुपातमा एक लाख ८९ हजार ६०० कित्ता हकप्रद जारी गर्न लागेको हो ।
समता माइक्रोफाइनान्सले हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि एनआईबिएल एस क्यापिटललाई विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हकप्रदमा असार ११ गतेसम्म कायमरहेका सेयरधनीले साउन २९ गतेसम्म धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति प्राप्त जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
त्यसका अलवा सेयरधनीले विक्री प्रबन्धकको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय र लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय सिमरा बाराबाट पनि हकप्रदमा भर्न सक्नेछन् ।
लघुवित्तको चुक्ता पूँजी तीन करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी पाँच करोड ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बिहीबार लघुवित्तको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता २१७० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कम्पनीको गत मंसिर १६ गते सम्पन्न चौथो बार्षिक साधारण सभाले यो हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।